Myanmar Free Islamic Books
Al-Quran Recitation Videos Word by Word highlighted with Indo-Pak Script recited by Mishary Rashid Alafasy
ဒီနှစ် လမြတ်ရမဇာန်မှာ ကုရ်အာန်ကို ကောင်းကောင်း မဖတ်တတ်သေးတဲ့သူတွေ၊ မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်ပြီး မဖတ်ရဲသူတွေ၊
ငယ်ငယ်ကတည်းက မသင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ ကုရ်အာန်ကို ဖတ်လိုသူတွေ သင်လိုသူတွေအတွက်၊ နားထောင်တဲ့ စ၀ါးဘ် လည်းရပြီး ပြန်ဖတ်တတ်သွားအောင်၊ ကုရ်အာန်ရဲ့ ကာရီဖတ်ရွတ်နေတဲ့ စာလုံးကို Highlight လုပ်ပေးသွားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေ လုပ်ထားပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ များများ လက်ဆင့်ကမ်း အသိပေးခြင်းဖြင့် ဒီဗီဒီယိုတွေကို ပြုလုပ်သူများကဲ့သို့ စ၀ါးဘ် ကုသိုလ် ရယူကြပါရန် ခင်မင်စွာ အသိပေးအပ်ပါတယ်။
Youtube Channel Name and Link
Al-Quran word by word highlighted with Indo-Pak Script recited by Mishary Rashid Alafasy.
Al-Quran Word by Word Highlighted with Indo-Pak Script RecitedBy Alafasy
လက်ရှိ upload လုပ်ပြီးသား စူရဟ် - 98 ပုဒ် ( စူရဟ်-18 ကနေ စူရဟ်-114 ထိ)
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ စူရဟ်တွေကို ဒီနှစ် လမြတ်ရမဇာန်မှာ ဆက်လက် upload လုပ်သွားပါမယ်။ အင်ရှာအလ္လာဟ်။
Posted at 18:28:00 No comments: Links to this post
Para 28, 29
Para 28, 29 ( 20 surahs - New Version, Updated Audio Edition )
Para 28 = Surah 58 to Surah 66
Para 29 = Surah 67 to Surah 77
Surah 61 to Surah 64
Surah 65 to Surah 67
Surah 68 to Surah 70
Surah 71 to Surah 73
Surah 74 to Surah 77
ပါဝင်သော စူရဟ် ကဏ္ဍများ
1 စူရဟ် မုဂျာဒိလဟ်၊ စောဒကဝင်သောမိန်းမကဏ္ဍ
S058-The Woman Who Disputes (Whole surah)
2 စူရဟ် ဟရှရ်၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ကဏ္ဍ
S059-The Gathering (Whole surah)
3 စူရဟ် မုမ်သဟနဟ်၊ စစ်ဆေးခြင်းကဏ္ဍ
S060-The Woman to be examined (Whole surah)
4 စူရဟ် ဆွားဖ်၊ တန်းစီခြင်းကဏ္ဍ
S061-The Row or Rank (Whole surah)
5 စူရဟ် ဂျုမုအဟ်၊ သောကြာနေ့ကဏ္ဍ
S062-Friday (Whole surah)
6 စူရဟ် မုနားဖိကူးန်၊ အယောင်ဆောင်သူများကဏ္ဍ
S063-The Hypocrites (Whole surah)
7 စူရဟ် အတ်သဂါဘွန်း၊ အရှုံးအမြတ်ပေါ်လွင်မည့်နေ့ကဏ္ဍ
S064-Mutual Loss and Gain (Whole surah)
8 စူရဟ် သွလားက်၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းကဏ္ဍ
S065-The Divorce (Whole surah)
9 စူရဟ် သဟ်ရီမ်း၊ တားမြစ်ခြင်းကဏ္ဍ
S066-The Prohibition (Whole surah)
10 စူရဟ် မွလ်က်၊ စိုးမိုးခြင်းကဏ္ဍ
S067-Dominion (Whole surah)
11 စူရဟ် ကလာမ်၊ မင်တံကဏ္ဍ
S068-The Pen (Whole surah)
12 စူရဟ် ဟက္ကဟ်၊ အမှန်မုချဖြစ်မည့်အရာကဏ္ဍ
S069-The Inevitable (Whole surah)
13 စူရဟ် မအာရိဂ်ျ၊ အဆင့်အတန်းများကဏ္ဍ
S070-The Ways of Ascent (Whole surah)
14 စူရဟ် နူးဟ်၊ တမန်တော်နူးဟ်ကဏ္ဍ
S071-Noah (Whole surah)
15 စူရဟ် ဂျင်န်၊ ဂျင်(န်)သတ္တဝါကဏ္ဍ
S072-The Jinn (Whole surah)
16 စူရဟ် မုဇမ်းမစ်လ်၊ ကိုယ်ရုံခြုံထားသူကဏ္ဍ
S073-The One Wraped in Garments (Whole surah)
17 စူရဟ် မုဒဒ်စေ့ရ်၊ စောင်ခြုံထားသူကဏ္ဍ
S074-The One Enveloped (Whole surah)
18 စူရဟ် ကိယာမဟ်၊ ရှင်ပြန်ထမည့်နေ့ကဏ္ဍ
S075-The Resurrection (Whole surah)
19 စူရဟ် အင်န်စာန်၊ ခေတ်ကာလကဏ္ဍ
S076-Man or Time (Whole surah)
20 စူရဟ် မွရ်စိလားသ်၊ စေလွှတ်ခြင်း ခံရသောလေများကဏ္ဍ
S077-Those sent forth (Whole surah)
Posted at 17:27:003comments: Links to this post
Para 30 - ( 37 surahs - New Version, Updated Audio Edition )
မူရင်းဖတ်ပြသူ Surah 78-82, 84 -115 (စုစုပေါင်း 36 Surah)
ဒေါ်အေးအေးဝင်း Surah 83 (စုစုပေါင်း 1 Surah)
Note: Even Though we tried our best to get good quality, some surahs haveabit of pop sound. It is more pronounced when you are listening with Headset or ear piece. If you are annoyed with it, please use speaker since it is quite immune to those poping sound.
Surah 78 to Surah 82
Surah 83 to Surah 89
Surah 90 to Surah 98
Surah 99 to Surah 114
1 စူရဟ် နဗအ်၊ သတင်းကဏ္ဍ
S78-The Great News (Whole surah)
2 စူရဟ် နာဇိအားသ်၊ ဆွဲငင်နှတ်ယူသူများကဏ္ဍ
S79-Those Who Pull Out (Whole surah)
3 စူရဟ် အဗစ၊ သူမျက်မှောင်ကြုတ်ကဏ္ဍ
S80-He Frowned (Whole surah)
4 စူရဟ် သက်ဝီးရ်၊ ခေါက်လိပ်ခြင်းကဏ္ဍ
S81-Wound Round and Lost its Light (Whole surah)
5 စူရဟ် အင်န်ဖိသွားရ်၊ တစစီဟတ်တပ် အက်ကွဲခြင်းကဏ္ဍ
S82-The Cleaving (Whole surah)
6 စူရဟ် မုသွဖ်ဖိဖီးန်၊ အလေးခိုးသူများကဏ္ဍ
S83-Those Who Deal in Fraud (Whole surah)
7 စူရဟ် အင်န်ရှိကွားက်၊ တစစီအက်ကွဲခြင်းကဏ္ဍ
S84-The Splitting Asunder (Whole surah)
8 စူရဟ် ဘုရူးဂ်ျ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီနက္ခတာယာများကဏ္ဍ
S85-The Big Stars (Whole surah)
9 စူရဟ် သွာရစ်က်၊ ညဉ့်၌ လာသောအရာကဏ္ဍ
S86-The Night Commer (Whole surah)
10 စူရဟ် အအ်လာ၊ အမြင့်မြတ်ဆုံးအရှင်ကဏ္ဍ
S87-The Most High (Whole surah)
11 စူရဟ် ဂါရှိယဟ်၊ ဖုံးလွှမ်းမည့်အဖြစ်အပျက်ကဏ္ဍ
S88-The Overwhelming (Whole surah)
12 စူရဟ် ဖဂျရ်၊ နံနက်မိုးသောက်ချိန်ကဏ္ဍ
S89-The Dawn (Whole surah)
13 စူရဟ် ဗလ်ဒ်၊ မြို့တော်ကဏ္ဍ
S90-The City (Whole surah)
14 စူရဟ် ရှမ်းစ်၊ သူရိယနေမင်းကဏ္ဍ
S91-The Sun (Whole surah)
15 စူရဟ် လိုင်းလ်၊ ညဉ့်ကဏ္ဍ
S92-The Night (Whole surah)
16 စူရဟ် အဒ်ဒုဟာ၊ နေတက်ချိန်ကဏ္ဍ
S93-The Forenoon (Whole surah)
17 စူရဟ် ရှရ်ဟ်၊ (အသိအမြင်)ကျယ်ဝန်းစေခြင်းကဏ္ဍ
S94-The Opening Forth (Whole surah)
18 စူရဟ် အသ်သီးန်၊ သဖန်းသီးပင်ကဏ္ဍ
S95-The Fig (Whole surah)
19 စူရဟ် အလက်၊ တွယ်ကပ်သောသွေးခဲကဏ္ဍ
S96-The Clot (Whole surah)
20 စူရဟ် ကဒရ်၊ ကဒ်ရ်ကဏ္ဍ
S97-The Night of Decree (Whole surah)
21 စူရဟ် ဗိုင်းယိနဟ်၊ ထင်ရှားသော သက်သေလက္ခဏာကဏ္ဍ
S98-The Clear Evidence (Whole surah)
22 စူရဟ် ဇစ်လ်ဇလဟ်၊ မြေငလျင်ကဏ္ဍ
S99-The Earthquake (Whole surah)
23 စူရဟ် အားဒိယားသ်၊ လျင်မြန်သောမြင်းများကဏ္ဍ
S100-Those That Run (Whole surah)
24 စူရဟ် ကားရိအဟ်၊ ကပ်ဘေးကြီးကဏ္ဍ
S101-The Striking Hour (Whole surah)
25 စူရဟ် အသ်သကာစွတ်ရ်၊ လောကီစည်းစိမ်ပြိုင်ဆိုင်မှုကဏ္ဍ
S102-The Piling Up (Whole surah)
26 စူရဟ် အဆ်ွရ်၊ ခေတ်ကာလကဏ္ဍ
S103-The Time (Whole surah)
27 စူရဟ် ဟုမဇဟ်၊ ချောပစ်ကုန်းတိုက်သူကဏ္ဍ
S104-The Slanderer (Whole surah)
28 စူရဟ် ဖီးလ်၊ ဆင်ကဏ္ဍ
S105-The Elephant (Whole surah)
29 စူရဟ် ကုရိုင်းရှ်၊ "ကုရိုက်ရှ်"အမျိုးသားများကဏ္ဍ
S106-Quraysh (Whole surah)
30 စူရဟ် မားအူးန်၊ အသေးအဖွဲအကူအညီကဏ္ဍ
S107-The Small Kindness (Whole surah)
31 စူရဟ် ကောင်ဝ်ဆယ်ရ်၊ ကောင်ဆရ်ကဏ္ဍ
S108-The River in Paradise (Whole surah)
32 စူရဟ် ကားဖိရူးန်၊ ငြင်းပယ်သူများကဏ္ဍ
S109-The Disbelievers (Whole surah)
33 စူရဟ် နဆ်ွရ်၊ အကူအညီကဏ္ဍ
S110-The Help (Whole surah)
34 စူရဟ် မစတ်ဒ်၊ စွန်ပလွံလျှော် \_ အဗူလဟဗ်ကဏ္ဍ
S111-The Palm Fibre (Whole surah)
35 စူရဟ် အိခ်လားစ်ွ၊ စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ခြင်းကဏ္ဍ
S112-The Purity (Whole surah)
36 စူရဟ် ဖလက်၊ နံနက်နေထွက်ချိန်ကဏ္ဍ
S113-The Daybreak (Whole surah)
37 စူရဟ် နားစ်၊ လူသားများကဏ္ဍ
S114-Mankind (Whole surah)
Posted at 16:32:00 1 comment: Links to this post
စူရဟ် နိစာဟ်၊ အမျိုးသမီးများကဏ္ဍ
"စူရဟ် နိစာဟ်၊ အမျိုးသမီးများကဏ္ဍ"
Surah4- ( New Version, Updated Audio Edition )
ဖတ်ပြသည့်ကျမ်း : မွတ်စ်လင်မ်ဗဟိုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ထုတ် ကုရ်အာန်မြန်မာဘာသာပြန်ကျမ်း အတွဲ (၁)
မူရင်းဖတ်ပြသူ Ayah 1-50, 71-115, 135, 142-176 (စုစုပေါင်း 131)
ဘစ်လ်ကိစ် Ayah 51-70, 136-141 (စုစုပေါင်း 26)
ဖြည့်-ဖတ်ပြသူ (မူရင်းမရှိ) Ayah 116 to 134 (စုစုပေါင်း 19)
S004-The Women (Ayah 1 to 82)
S004-The Women (Ayah 83 to 176)
Posted at 08:30:00 1 comment: Links to this post
စူရဟ် အင်မ်ရာန်း၊ အင်(မ်)ရာန်မ်မျိုးနွယ်ကဏ္ဍ
( New Version, Updated Audio Edition )
S003-The Family of 'Imran (Ayah 1 to 100)
S003-The Family of 'Imran (Ayah 101 to 200)
Posted at 10:58:00 1 comment: Links to this post
"စူရဟ် ဗကရဟ်၊ နွားကလေး ကဏ္ဍ" (New Edition)
S002-The Cow (Ayah 1 to 85)
S002-The Cow (Ayah 86 to 157)
S002-The Cow (Ayah 158 to 232)
S002-The Cow (Ayah 233 to 286)
Posted at 06:37:002comments: Links to this post
စူရဟ် ဖာသိဟာ၊ အဖွင့်ကဏ္ဍ (New Edition)
S001-The Opening (Whole surah)
Posted at 06:35:00 No comments: Links to this post
Posted at 11:05:00 1 comment: Links to this post
စူရဟ် ဆွားဒ်၊ ဆွာဒ်ကဏ္ဍ
"စူရဟ် ဆွားဒ်၊ ဆွာဒ်ကဏ္ဍ"
S038-Sad (Whole surah)
S038-Sad (Individual ayah mp3 files)
Number of Ayahs: 88
Posted at 11:02:00 1 comment: Links to this post
စူရဟ် အတ်စ်စွားဖားသ်၊ စီတန်းနေသူများကဏ္ဍ
S037-Those Ranged in Ranks (Whole surah)
S037-Those Ranged in Ranks (Individual ayah mp3 files)
Number of Ayahs: 182
Posted at 10:59:00 No comments: Links to this post
စူရဟ် ယာစီးန်၊ ယာစီန်ကဏ္ဍ
"စူရဟ် ယာစီးန်၊ ယာစီန်ကဏ္ဍ"
S036-YaSeen (Whole surah)
S036-YaSeen (Individual ayah mp3 files)
Number of Ayahs: 83
Posted at 10:58:00 No comments: Links to this post
စူရဟ် ဖသာ့ဟ်၊ စတင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကဏ္ဍ
"စူရဟ် ဖသာ့ဟ်၊ စတင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကဏ္ဍ"
S035-The Originator of Creation (Whole surah)
S035-The Originator of Creation (Individual ayah mp3 files)
Number of Ayahs: 45
စူရဟ် စဗာ၊ ရှီဗာကဏ္ဍ
"စူရဟ် စဗာ၊ ရှီဗာကဏ္ဍ"
S034-Sheba (Whole surah)
S034-Sheba (Individual ayah mp3 files)
Number of Ayahs: 54
Posted at 10:54:00 No comments: Links to this post
စူရဟ် အဟ်ဇားဗ်၊ မဟာမိတ်များကဏ္ဍ
"စူရဟ် အဟ်ဇားဗ်၊ မဟာမိတ်များကဏ္ဍ"
S033-The Confederates (Whole surah)
S033-The Confederates (Individual ayah mp3 files)
Number of Ayahs: 73
Posted at 10:53:00 No comments: Links to this post
စူရဟ် စဂ်ျဒါဟ်၊ ပျပ်ဝပ်ဦးချခြင်းကဏ္ဍ
"စူရဟ် စဂ်ျဒါဟ်၊ ပျပ်ဝပ်ဦးချခြင်းကဏ္ဍ"
S032-The Prostration (Whole surah)
S032-The Prostration (Individual ayah mp3 files)
Posted at 10:49:00 No comments: Links to this post
စူရဟ် လွက်မန်း၊ သုခမိန်ဏ္ဍ
"စူရဟ် လွက်မန်း၊ သုခမိန်ကဏ္ဍ"
S031-Luqman (Whole surah)
S031-Luqman (Individual ayah mp3 files)
Number of Ayahs: 34
Posted at 10:42:00 No comments: Links to this post
စူရဟ် ရူးမ်၊ ရောမနိုင်ငံကဏ္ဍ
S030-Rome (Whole surah)
S030-Rome (Individual ayah mp3 files)
Number of Ayahs: 60
Posted at 10:28:00 No comments: Links to this post
စူရဟ် အန့်ကဗူးသ်၊ ပင့်ကူကောင်ကဏ္ဍ
Quran Myanmar Translation Reading (Saudi Quran)
S029-The Spider (Whole surah)
S029-The Spider (Individual ayah mp3 files)
Number of Ayahs: 69
မှတ်ချက်။ အရဗီဖတ်သံနှင့် အာယဟ်နံပတ်များကို ဖြုတ်ထားပါသည်။ အင်ရှာအလ္လာဟ် နောင်တွင် ကာရီ-မီရှယ်ရီး ဖတ်ရွတ်သံဖြင့် တွဲ၍တင်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ပါမည်။
Posted at 10:15:00 No comments: Links to this post
Lunar Phases Simulator (NAAP)
Demonstrates the correspondence between the moon's position in its orbit, its phase, and its position in an observer's sky at different times of day.
Posted at 14:26:00 1 comment: Links to this post
Whom Allah swt loves & does not like ...
Summary Taken from Saheeh International ...
Whom Allah swt loves....
Indeed, Allah loves the doers of good.
Indeed, Allah loves those who are constantly repentant and loves those who purify themselves."
Indeed, Allah loves those who fear Him.
Indeed, Allah loves those who rely [upon Him].
Whom Allah swt does not like....
And Allah does not like every sinning disbeliever.
Indeed, Allah does not like the disbelievers.
Allah does not like the wrongdoers.
Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful.
Indeed, He does not like those who commit excess.
And Allah does not guide the defiantly disobedient people."
Indeed, He does not like the arrogant.
Allah does not guide the disbelieving people.
Indeed, Allah does not like the exultant.
And Allah does not like corrupters.
Posted at 10:43:00 No comments: Links to this post